Malta N'elu Europe Egwurugwu Index maka Afọ Ise Na-agba ọsọ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » LGBTQ » Malta N'elu Europe Egwurugwu Index maka Afọ Ise Na-agba ọsọ
Na-agbasa News Travel • LGBTQ • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Malta n'elu Europe Egwurugwu
Maka afọ nke ise na-agba ọsọ, ikike LGBTIQ nke Malta bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa maka ụmụ amaala, ebe etinyere Malta mbụ na ILGA's European Rainbow Map Index. N'ime mba 49 dị na Europe, etinyere Malta onyinye pụrụ iche 89% maka ịkwanyere iwu, atumatu, na ibi ndụ nke obodo LGBTQ na agwaetiti Mediterenian.
Nke izizi malitere na 2009, European Rainbow Index na-enyocha mmetụta dị mma na nke adịghị mma na obodo LGBTQ ma tụlee ọtụtụ ihe gụnyere ịkọwapụta ikike nwoke na nwanyị, nsogbu ezinụlọ na alụm di na nwunye na ikike mgbapu Mba Europe ọ bụla nwere ọnọdụ n'ọkwá; 100% bụ onye kachasị nwee nkwanye ùgwù maka ikike ụmụ mmadụ na nha anya zuru oke na ọha mmadụ, na 0% na-egosi oke mmebi na ịkpa oke.
Malta ebutela ụzọ na atumatu nnwere onwe obodo ya, tinyere iwebata ndị ọrụ obodo, alụm di na nwunye, na nnabata maka nwoke na nwanyị, yana iwu njirimara nwoke na nwanyị. 2017 hụrụ alụlụ nwoke na nwanyị ka ọ bụrụ nke iwu kwadoro na Malta, yana iwebata akwụkwọ ikike ngafe nwoke na nwanyị na 2018. Nke a sochiri nnabata nke nzuko omeiwu nke Iwu Gender Identity Act na 2015 wee hụ na ndị mmadụ nwere ike inwe ụdị okike ha gosipụtara nke ndị ọchịchị nabatara Steeti.
Malta nwere obi ụtọ maka mmata a ma guzosie ike dị ka ebe dị mma ma na-anabata mmadụ niile. LGBTQ njem bụ ihe siri ike na-elekwasị anya na mba ahụ, na Malta anabatala ememme LGBTQ yana ịkwado ma kwado Mpako ma na agwaetiti na esenidụt.
Tolene Van Der Merwe, Director UK & Ireland Malta Tourism Authority, kwuru, sị: “Anyị nwere obi ụtọ na Malta emeela ka a kpọọ ya ọzọ dị ka ebe mbụ maka ndị njem LGBTQ na Europe.
Ndị Malta nwere aha ọma maka ọmịiko na ile ọbịa nke ọma, nke a na-egosipụtakwa n'ụzọ doro anya etu esi anabata ndị njem niile n'agwaetiti ndị ahụ, yana otu n'ime ihe ndị mere anyị ji jisie ike idowe ebe anyị dị n'elu Index Rainbow. Malta jikọtara ọdịnala ọdịnala ọdịnala na nke akụkọ ọdịnala yana echiche nke oge a na-anabata ndị njem niile na ndị anyị na-aga n'ihu na-esetịpụrụ ndị mba Europe ndị ọzọ ihe atụ na-akpali akpali.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara nleta Malta www.maltauk.com
Malta bu agwaetiti n'ime etiti Mediterenian. Mejupụtara agwaetiti atọ - Malta, Comino na Gozo - Malta mara maka akụkọ ntolite ya, ọdịbendị ya na ụlọ arụsị ndị gafere afọ 7,000. Na mgbakwunye na ebe ewusiri ike ya, ụlọ arụsị mechiri emechi na ime ụlọ ili ozu, Malta ji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku awa atọ nke anwụ kwa afọ. Akpọrọ isi obodo Valletta aha European Capital nke Omenala 3,000. Malta bụ akụkụ nke EU na 2018% na-asụ Bekee. A maara agwaetiti a maka mmiri ya, nke na-adọta aficionados si n'akụkụ ụwa niile, ebe ndụ abalị na ememme egwu na-adọta ọnụ ọgụgụ ndị na-eto eto nke ndị njem. Malta bụ ụgbọ elu dị mkpirikpi atọ na nkeji iri na ise site na UK, na-apụ kwa ụbọchị site na ọdụ ụgbọ elu niile dị na mba ahụ.